FRA oo uu culeeys ka soo fuulay xaaladaha cakiran ee caalamka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Daryyrad ciidammada dagaalka. Sawirle: Mats Nyström/Försvarsmakten
FRA oo uu culeeys ka soo fuulay xaaladaha cakiran ee caalamka
La daabacay tisdag 26 januari 2016 kl 11.55
Tababarrada dayuuradaha dagaalka ee waayadaan ugu dambeeeyay ka dhacayey agagaarka xuduuddaha Sweden ayaa gaaray herkii ugu sareeyay, wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa, sida uu sheegay sarkaal u hadlayay hayadda magaceeda loo soo gaabiyo laanta signaallada raadiya ee ciidammada qalabka sida.
Hayadda ayaa sidoo ale war-bixinteeda sannadkii 2015 kaga hadashay argagixisada iyo weerarrada saayberka ee la isku weeraro internet-ka oo muhiimad hoowlahooda ugu fadhiyay sannadkii ina dhaafay ee 2015.
Hayadda FRA ayay hoowlaheedu ka mid yihiin in taageero laga siiyo wasaaradda difaaca, ciidammada nabad-sugidda ee Säpo iyo dawladda iyada oo la adeegsaneyo war-bixinnada signaalada qarsoodiga ah ee la isku diro. Haddaba war-bixinta sannadkii 2015 oo maanta la sii dayn doono ayay hayaddu ku sheegtay in kor u kacay welwelka caalamka aloo-san uu hor-seeday in howlaha taageero ee hayadda looga baahdo ama laga soo codsado ey aad kor u kaceen.
War-bixinta ayaa looga digay iney kor u kacday halista ah inuu shil ka dhaco nawaaxiga badda Östersjö.
– Kolka laga hadlayo nawaaxiga xuduudaha Sweden waxaa aad kor ugu kacay dhaqdhaqaaqyada milateri sannadihii ugu dambeeyey, iyo sidoo kale si ka khalafsan in loo dhaqmo. Waxaannu aragnay habka ay dayuurradaha dagaalka ee Ruushku ugu soo dhowaadaan dayuurradaha dalkan, sida uu sheegay Fredrik Wallin oo hayadda FRA u hadlayay.
Marka laga yimaado xaaladda hab-socodka siyaasadda ammaanka ayay argagixisada caalamku tahay xaalad kale oo muhiimad ugu fadhida howlaheeda hayadda FRA. Iyadoona muddadii lagu guda jiray sannadkii 2015 ay hayaddu aad kor ugu qaaday howlaha arrimmahaa la xiriira, gaar ahaan wixii ka dambeeyay kolkii kor loo qaaday saqafka xaaladda cabsida ammaan-darro ee dalka bishii noveembar 2015.
– Waxaa middaa miiska si ka ballaaran u soo saaray weerarro iyo hanjabaadihii socday waayadii ugu dambeeyay, sida uu sheegay Fredrik Wallin.
Maxaa ka mid ah war-bixinnada aad la qaybsataan hayadaha kale?
– Waxay ku xirnaan kartaa ururrada argagixisada ee dibadda, iney ururro argagixiso taageero dhaqaale ka helaan Sweden, ama dadyoow u socdaala sidii ey gacan uga geey-san lahaayeen falalka argagixis-nimo. Waxaa kaloo ka mid ah haddii ey jiraan ku talo gal weerarro dalkan ku soo wajahan, sida uu sheegay Fredrik Wallin.
Qodob saddexaad ee war-bixinta lagu soo ban-dhigay ayaa ah weerarrada dhanka aaladda internet-k, waxa lagu magacaabo - cyberangrepp, kuwaasina oo muhiimadda laga leeyahay ay tahay sidii ey quwado ajnabi ku heli lahaayeen xogag muhiimad u ah hayadaha dawladda iyo shirkadaha.
Intii lagu guda jiray sannadkii 2015 ayay soo shaac baxeen weerarro dhanka internet-ka ee loo geeystay hayadaha cilmi baarista, warshadaha iyo hayadaha dawliga ah, sida uu sheegay Fredrik Wallin.
– Halista ugu ballaaran ee nagaga aadan ciidammada sirta ee waddammada ajaaniibta ayaa ah midda la xiriirta teknoloojiyada casriga ee IT, isagoo hadalkiisii sii watana sheegay iney qayb yar oo ka mid ah ey aad ugu firfircoon yihiin falalka lagu weerareyo dalka Sweden. Waana kuwa aan inta badan xoogga saarno, sida uu sheegay af-hayeen u hadlayay hayadda FRA, Fredrik Wallin.